Al-Shabaab oo 3 ruux ku dishay goob dhuxusha laga jaro oo ku taal Jubada Hoose – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in rag hubeysan ka tirsan Al-Shabaab ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa goob dhuxusha laga jaro oo ku taal deegaanka Buur-Gaabo oo qiyaastii 240KM galbeed ka xigta magaalada Kismaayo
Lix ruux ayaa klu dhaawacmay weerarkaas, oo noqonaya kii u horeysay Al-Shabaab ku qaado goob laga qodo dhuxusha.
Al-Shabaab ayaa horay amaro ay soo saartay ku mamnuucday jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha.
Ciidamada Kenya iyo Maamulka Jubbaland ayaa horay loogu eedeeyay inay dhuxul ka dhoofiyaan Dekeda Kismaayo.
Warbixin sanadkii 2014-kii soo saartay Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in hal milyan oo jawaan oo dhuxul ah la dhoofiyay, iyadoo ciidamada Kenya ay goobjoog ahaayeen, dhuxushaas oo horey u tiilay dekedda Kismaayo.
Waxaa jira warar sheegaya in dhoofinta dhuxusha Somalia ay si qarsoodi ah ku socoto iyadoo wali Soomaaliya ay saran tahay xayiraadda Qaramada Midoobay ee dhoofinta dhuxusha tan iyo sanadkii 2012kii.